ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ခွေးများ Love ဖြစ်ရမည်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 21 2020 |6မိဖတ်ပြီးသား
ငါသည်ငါ့မိသားစုကိုနားထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထိုအရပ်၌ထွက်ပြန်ရ. “ဘဝကွာရှင်းပြီးနောက်ရှိတယ်, စာရာသည်,” အကြှနျုပျအဘထင်ရှားသော, အစဉ်အမြဲကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ချင်ပါတယ်ကိုမခံဘဲ.
“ကြာကြာစောင့်ဆိုင်း, ပိုခက်လေဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်” ငါ့နှမခဲ့ကာရိုလ်ရဲ့နည်းနည်းကျောက်မျက်များမဝယ်ယူရေး, သူမကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ခဲ့သည်ဖြစ်စေမ သိ. အချို့လမ်းခဲ့လျှင်အဖြစ်
သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၏လကြာပြီးတဲ့နောက်, သတင်းစာထဲတွင်ကြော်ငြာပုဂ္ဂိုလ်ရေးတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ပေးအရှိဆုံး detach လမ်းပုံရသည်. ငါသည်ငါ၏ညီအစ်ကိုတစ်ဦး၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏မိတ်ဆွေတဦးနဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ထိုင်စရာမလို, ဖြစ်နိုင်မိုက်ကယ်၏, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျော်နီရဲ့သို့မဟုတ် Billy ဂျူနီယာရဲ့, ကျနော်အရသာလွန်းအာရုံကြောခဲ့တဲ့မုန့်ညက်ကိုပျော်မွေ့ရန်ဟန်ဆောင်. ငါသည်ငါ့အစ်မခရစ္စညျအကြှနျုပျကိုခေါ်ဆိုသို့စကားပြောခဲ့သူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူပင်ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုမခံနိုင်ဘဲလိုအပ်ပါတယ်. ငါ့အလားအလာကိုငါတိတ်တဆိတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆက်မည်ဟုသို့မဟုတ်အလိုမရှိ.
ရိုးသားသော, HOPELESSLY ROMANTIC, အဟောင်းလူကြီးလူကောင်းကြော့ထမင်းစားခန်းအတော်ပင်သောသူအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကိုရှာတတ်၏, ကခုန်နှင့်ချစ်ခင်စုံမက်၏နှေးကွေးပွင့်. ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ, ဎ / s နဲ့, ငယ်ရွယ် 50s, မုဆိုးဖို, ခွေးကိုချစ်သောသူ, ကလေးများနှင့်ရှည်လျားသောကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့စက်ဘီးစီး.
ကြော်ငြာငါ့ကိုငါကြည့်ရှုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ခုန်ချ. အများကြီးယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းမရှိသေးသည် ဖြစ်.. ဘော်စတွန်သတင်းစာတွေအနက်တခုအားပထဝီအနေအထားခုန်အန္တာရာယ်မယ့်အစား, ဒါကြောင့်ဒေသခံအပတ်စဉ်ထုတ်တွင်ကြော်ငြာ၏တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာမှငါ့ရှာဖွေရေးအကျဉ်းချထားရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏လုံခြုံစိတ်ချမှုနည်းခဲ့ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်င့်. တစ်ဝက်ဘော့စတွန်နှင့်ကိတ် Cod အကြားခုနစ်ခုမြို့များကိုတစ် edition အတွက်အတူတကွ clumped ခဲ့သည်. လေးခုကော်လံ “အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများရှာလျက်။” တစ်ကော်လံ၏လေးပုံတစ်ပုံ “အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများရှာလျက်,” နှစ်ယောက်တို့ entries တွေကို “အမျိုးသမီးများရှာလျက်အမျိုးသမီးများ,” ဘုရားသခင်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကော်လံ၏ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ခဲ့ “အမျိုးသားများရှာလျက်နေကြ၏။”
အကယ်စင်စစ်ငါသည်ကြော်ငြာများကိုအားမရလိင်အမျိုးသမီးများစိတ်ပျက်စရာပိုလျှံမှထည့်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့, ဒါကြောင့်ငါကဒုတိယအမျိုးအစားအကြှနျုပျအားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလှည့်. ဒါဟာထိန်းချုပ်မှုတဲ၏ရှယ်ယာထက်ပိုဖွဲ့စည်းထားပြီးခဲ့သည်, ဒီကောင်လေးနှင့်တူ-5'4 အကြားဆွဲဆောင်မှုသောမိန်းမရှာဖွေနေ″ နှင့် 5'6″, 120-135 ပေါင်။, ပျော့ပျောင်း-ဟူသောဗျာဒိတ်တော်, အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို, ငွေရေးကြေးရေးအလုံလုံခြုံခြုံ, ဖြစ်နိုင်ဆက်ဆံရေး. ကျနော်လေ့လာကြည့်-သည်မြင်သောကြောင့်သူ့ရဲ့အလားအလာဆက်ဆံရေးကိုအတိုင်းအတာအပေါ် step အောင်ဒီ dreamboat မြင်ယောင်တော်မူပြီးလျှင်အတွက် penciled ရှေ့တော်၌မိမိတို့ဘဏ်အထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြသနိုင်.
ပြီးနောက် ဤ တစ်. Quaint, ချစ်စရာကောင်း, တစ်နည်းနည်းနဲ့နီးပါးအကျွမ်းတဝင်. ငါရောက်တဲ့အခါ ချစ်ခင်စုံမက်၏နှေးကွေးသောပွင့်, ဒါကြောင့်ပဲငါ၌ပြုတော်. ငါဘယ်လောက်အထီးကျန်ဆန်ကိုမှတ်မိဖန်ဆင်းတော်.
ငါသည်အဆင်းနီသောကလောင်အတွက်ကြော်ငြာလှည့်ပတ်, ထို့နောက်တစ်ဦး jagged မှန်စတုဂံရှိစက္ကူအထဲကကိုဆုတ်. ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာကကျော်သယ်ဆောင်နှင့်အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်ရိုက်နှိပ်, ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခင်:
သင်သည်စစ်မှန်သောဖြစ်လောက်အောင်ကောင်းလွန်းနေအသံ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းကျနော်တို့ကအများပြည်သူရာအရပ်ကိုanywayóatအတူတကွကော်ဖီခွက်ရှိသည်နိုင်. ငါသည်တ WF ဖြစ်ကြောင်းကို, ကွာရှင်း, ငယ်ရွယ် 40, အဘယ်သူသည်ခွေးနှင့်ကလေးများချစ်သောသူ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုရှိသည်ဖြစ်သွားပါဘူး.
ငါကောင်တီ Connections အရုံးတွေမှာ Box ကို 308P အကြှနျုပျအားစာတစ်စောင်ပို့, အရာအလိုတခုတည်း, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ဒါကြောင့် forward. ကျွန်မရဲ့တုံ့ပြန်မှုအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်အကွက်အရေအတွက်လုံခြုံစေရန်ငယ်လေးတစ်စစ်ဆေးမှုများချုပ်ချယ်. တစ်ပါတ်ထက်လျော့နည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ငါသည်ငါ၏အဖြေခဲ့:
ငါသည်အ Marshbury မှာနံနက်ပိုင်းဘုန်းအသရေမှာသင်ကော်ဖီဝယ်ယူခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ 10 ဒီလာမယ့်စနေနေ့ AM? ကျနော့်မှာအဝါရောင်နှင်းဆီတင်ဆောင်လာသောလိမ့်မယ်.
အဆိုပါဖိတ်ကြားချက်ကိုတကယ့်လက်နှိပ်စက်နှင့်အတူအထူဆင်စွယ်စာရွက်ပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်, စာလုံးအိုနှင့် E အနက်ရောင်မင်၏အစိုင်အခဲအစက်ဖွဲ့စည်း, ့ကျွန်မကလေးဘဝအဟောင်းကိုကို manual တူ. ကျွန်မရိုးရိုးလေးပဲပြန်ရေးသားခဲ့သည်, အချိန်နှင့်အဆင်ပြေရာအရပ်ကို. အဲဒါကိုမျှော်လင့်.
ငါသည်အဘယ်သူကိုမျှအကြှနျုပျလုနီးပါး-date ဖြစ်အောင်မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး, အနိုင်နိုင်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားရန်ခွင့်ပြု. အဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးငါ့မျှော်လင့်ချက်တက်ရဖို့ရိုးရှင်းစွာရှိခဲ့သည်, တစ်ဦးကျဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရာချခြင်းလိုအပ်ချက်မရှိ.
သောကြာနေ့ညဥ့်အခါအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ရေးနိုး, ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုးခဲ့. ငါညဉ့်လုံးဆမ်းနှင့်အချိုးအကွေ့ကိုတက် နေ. မယ်လျှင်အဖြစ်. ထိုအခါငါစနေနေ့နံနက်အပေါ်မတူညီတဲ့မတ်မတ့်စုံတွဲတစ်တွဲပေါ်ကြိုးစားခဲ့, နောက်ဆုံးတော့တစ်ခုအဟောင်းနုတ်ပန်းခက်များကိုပုံနှိပ်နှင့်အတူအဝါရောင်ဆွယ်တာအင်္ကျီများနှင့်ကြာမြင့်စွာသောအင်္ကျီအပေါ်ဖြေရှင်း. ငါသည်ငါ၏ဆံပင် fluffed, တံခါးနားထွက်မသွားခင်တစ်စက္ကန့်အချိန်တချို့ကို mascara အပေါ်ပစ်ချနှင့်ငါ့အံသွားခဲ brushed.
နံနက်ဘုန်းအသရေခေတ်မှီ့တို၏, နေရောင်ကို-streaked Greenery တစ် delightfully overgrown hodgepodge, mismatched သံကုလားထိုင်နှင့်ဖြူရာဇမတ်ကွက်ပတ်လည် button ကိုကျောက်ပြားကို. ကော်ဖီသည်တန်ခိုးကြီးခြင်းနှင့်ဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအိမ်လုပ်နှင့်အရသာ. သင်သည်ထိုအလုပ်လုပ်သောလူမှညစ်ပတ်ပေရေရူပလာပြီမပါဘဲနာရီများအတွက်စားပွဲ၌ထိုင်နိုင်.
တံခါးနားအထိကျောထောက်နောက်ခံရှည်လျားသောစနေနေ့-နံနက်ယူ-ထွက်လိုင်း, ထိုသို့ကျောက်ပြားဖို့ငါသွားရာလမ်းကိုကျော်ထိန်းရန်ငါ့ကိုတစ်မိနစ်ကိုယူ. ငါသည်အလျင်အမြန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေ, Overload အပေါ်မှာငါ့အာရုံ, စားပွဲပေါ်မှာအနှံ့ draped ထိုနှင်းဆီကိုရွေးထုတ်ရန်ကြိုးစားနေ, ငါသည်အကျော် drive ပေါ်တွင်ပြန်ကြားခဲ့ဖွင့်လှစ်လိုင်းမှတ်မိဖို့.
“စာရာသည်, ငါ့ darlin’ မိန်းကလေး. ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအံ့အားသင့်. ဒီကိုလာနဲ့သင့်ရဲ့ချစ်လှစွာသောဖေဖေအဟောင်းတစ်ဦးပွေ့ဖက်ပေး။”
“ကောင်းစွာ, တစ်ဦးကောင်းဘယ်လို-Do-you-do င်. ထိုအချိန်၌ငါ့အလွန်အနှစ်သက်ဆုံးသမီးတစ်ဦးထံမှ။”
“Where'd ကိုသင်နှင်းဆီ get, ဖေဖေ?”
“အမျိုးသမီးတစ်ဦးမိတ်ဆွေ, ပျားရည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖခင်ကယခုအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများရှိသည်မယ်လို့ယခုဘဝ၏သဘာဝသင်တန်းကိုဖွင်, Saso. ငါသည်သင်တို့၏သန့်ရှင်းသူတို့သည်မိခင်နေ့တိုင်းငါ့ထံသို့သူမ၏ခွင့်ပြုချက်တီးတိုးရွတ်ဆိုခံစားကြရသည်။”
“ဒါကြောင့်, တစ်ဦး, သင်သည်ဤအရပ်၌အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားပါတယ်, ဖေဖေ?”
ငါ့ဦးနှောက်၏ဖုန်ထူထောင့်တစ်နေရာတွင်, synapses ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ကြ. “အိုဘုရားရေ. ဖေဖေ. ကျွန်မဖွင့် သင့်ရဲ့ရက်စွဲ. ငါသည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာပြန်ပြောသည်. ငါသည်ကိုယ်အဘ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာပြန်ပြောကြ၏။” ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, ငါသည်ဤတစ်ကောက်ခဲ့ကြရသည်လူအပေါင်းတို့သည်လောကရှိလူအပေါင်းတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာတွေ?
အကြှနျုပျအဘ blankly ငါ့ကိုကြည့်ရှု, ထို့နောက်အံ့သြစရာရှိသူ၏ shaggy ဖြူမျက်ခုံးရုတ်သိမ်း. သူတစ်ဖက်ရန်သူ၏ခေါင်းကိုမော့အဖြစ်သူ၏မျက်စိသည် skyward ပြောင်းရွှေ့. သူကနှုတ်ထွက်စာ၌သူ၏လက်ဖဝါးကိုတက်လှည့်. “ကောင်းစွာ, ယခု, စူပါမားကက်ကစာတမ်းများများအတွက်တယောက်င်. ပျားရည်, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်, သင်ကတစ္ဆေကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်တူအဖြူဖွင့်ရန်မလိုအပ်. ဒီမှာ. ဒီကိုသာငါ riffraff ကနေစိန်သိရန်သင့်အားဆောင်ခဲ့သက်သေထူသည်။”
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်နာလန်ထူအတုလုပ်တဲ့ဟာ Hurlihy မိသားစုအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တစ်တစ်ခုတည်းအဝါရောင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုငါ့အဘ၏ထက်အခြားတစ်ဦးလက်ကိုထ squelched. ငါသည်တနှေးနှေးအသက်ရှု ယူ. ,, ငါ့စိတ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုအကဲဖြတ်. “မသာကြောင်း, ဖေဖေ, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နှင့်ငါသည်စုဝေးတစ်ဦးဂျယ်ရီ Springer ပြပွဲပြုနိုင်သည်. အဘယ်မျှ '' သမီးတို့ချိန်းတွေ့အဘယ်သူëFathersရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း ''? ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, ဒီကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဖေဖေ. အဆိုပါ Oedipal ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုaloneó”
“Oedipal, smedipal. ယခုပင်ငါ့ပေါ်မှာရှိသမျှကောလိပ်ကျောင်းဆိုတော့မယူကြ, Sarry မိန်းကလေး။” ငါ့အဘသည်သူ၏မျက်ခုံးအောက်မှာမှထွက် peered. “ထိုအချစ်စရာကောင်းတဲ့သင်ကဲ့သို့, သင်က smidgen လျော့နည်း Flip တဲ့အချိန်သင့်ပင် lovelier နေသေးတယ်။”
ငါသည်အ Flip မှတ​​ပါးငါ၏အသာရွေးချယ်စရာဖြစ်ပုံမျက်ရည်ကိုပြန်မျိုချ, ငါ့အဘ၏လက်မှဖြတ်ပြီးကုလားထိုင်တွင်ထိုင်တော်မူ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားပွဲထိုးရောက် လာ. ငါကော်​​ဖီအမိန့်မှစီမံခန့်ခွဲ. “ခဏစောင့်ပါဦး. သင်ကနုပျိုငါးဆယ်မဟုတ်ပါဘူး, ဖေဖေ. သင်သည်အခြောက်ဆယ်ခြောက်င်. နှင့်တဲ့အခါဆိုင်ကယ်နောက်ဆုံးသောကာလသည်ရထားစီးခဲ့? သင်ကစက်ဘီးကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး. တဖန်သင်တို့ခွေးမုန်း၏။”
“ပျားရည်, ဒါကြောင့်ကပကတိဖြစ်ပါဘူး. ကဗျာအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ, ငါ့ဝိညာဉ်၏အောက်ခြေ၌ရှိပါ၏အဘယ်သူသည်အဖြစ်. နှင့်, စာရာသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ချိန်းတွေ့စတင်ဖွင်အရမ်းပျော်ပါတယ်. ကီဗင်သင့်အဘို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းမွန်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့၌မဟုတ်ခဲ့, Sweety ။”
“ငါသည်ကိုယ်အဘ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာပြန်ပြောသည်. အဲဒီချိန်းတွေ့မယ်. ဒါကြောင့်အနာရောဂါစွဲပါပဲ။”
တော်တော်စားပွဲထိုးမယ့်ငါတို့ဥစ္စာမှစားပွဲပေါ်မှာအနှံ့ကိုထောက်အဖြစ်အကြှနျုပျအဘကိုစောင့်ကြည့်. ထိုသူသည်ငါ၏လက် patted ဟုဆိုအဖြစ်သူ၏မျက်စိသည်သူမ၏အပေါ် နေ., “သင်သည်ပိုကောင်းလာမယ့်အချိန်လုပ်ပေးမယ်, ပျားရည်. ့ခက်တဲ့အလုပ်တက်စောင့်ရှောက်လော့။” အကြှနျုပျအဘရှားကသူ့ကြဲကြဲအညိုရောင်မျက်လုံးမှအထူဖြူသောဆံပင်တစ်ရုံရရှိသည်အတိုင်းငါစောင့်ကြည့်နေ. ကောင်လေးအတွက်သင်ခန်းစာရှာနိုင်…ယရှေုသညျ, သူ၏သမီးနှင့်အတူနေ့စွဲ.
“Oh, ဖေဖေ, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသင့်အကြောင်းမေ့လျော့. အကယ်. သင်သည်မှားရက်စွဲတယ်, လွန်း. သင်သည်မေမေမပါဘဲအထီးကျန်ဖြစ်ရပါမည်, huh?”
စားပွဲထိုးမထရပ်, ငါ့အဘ၏မျက်လုံးနှင့် Smile ဖမ်းမိ. သူမသည်ထွက်သွားတော့, သူကငါ့ကိုပြန်ပို့ရန်သူ၏အကြည့်လှည့်. “နေ့တိုင်းငါသူမ၏စဉ်းစား, တနေ့လုံး. နှင့်အလိုတော်ငါ့သဘာဝအလျောက်အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်. အကြှနျုပျမူကားကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ပါဘူး. ငါလေးခုနာရီလောက်မှာရှိသည်။”
“ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ, လေးနာရီလောက်မှာ? လေးဦးနာရီလောက်မှာတွင် Mass?”
“မလုပ်ပါနှင့်, darlin ''. အခြားချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးနာရီအချိန်တွင်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးကဖန်ခွက် Wee. ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ဖယောင်းတိုင်မကိုင်နိုင်သူကားအဘယ်သူ, ငါ့အဘို့မွှေးကြိုင်။”
ငါသည်ထိုတနေ့ရက်စွဲနှစ်ခုထဲကတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့လျှင်တစ်ဦးနှင့်နီးစပ်သည်အသွေးဆွေမျိုးနှင့်အတူနေ့စွဲရှိခြင်းဝေးလျော့နည်းစိတ်ထိခိုက်ခဲ့သည်ဟုထင်မှတ်. ကျွန်မအနာဂတ်ကိုးကားနိုင်ရန်ဝေးကြောင်းရယူ file ထဲမှာရှိမရှိအခြေအတင်ဆွေးနွေး, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်အပျက်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောနက်နဲချက်ချင်းရပ်ငြင်းပယ်ခြင်းထဲကိုခုန်ချပြီးမှ. ငါသည်ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုငါ့ကော်ဖီမတ်ခွက်ရုတ်သိမ်း. အကြှနျုပျအဘအားပေးသောပြုံးပြ.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းငါ့လက်ကောက်ဝတ်ခဲ့. ဒီတစ်ခါလည်းကိုယ်ရုံမျှသာမျိုဖို့မေ့သွားတယ်. ဒါပေမယ့်ငါ့အဘကိုငါ့မေးစေ့ကနေမီးလောင်ရာကော်ဖီ mop မှစက္ကူလက်သုတ်ပုဝါ၏ပုံနှင့်အတူစားပွဲအနှံ့ရောက်ရှိအဖြစ်, ကိုယ်က ပို. ပင်ဖွယ်ရှိငါစိုက်ပျိုး-up ကဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူရိုးရှင်းစွာတစ်ခါမျှသည်ဟုထင်.